Su'aalaha la isweydiiyo - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
Waa maxay dab -damiyaha isku -xiraha?
Xidhiidhiye kasta oo leh koronto, oo keeni kara dab, markaa isku-xiraha waa inuu ahaadaa mid u adkaysta dabka. Waxaa la soo jeediyay in la doorto isku xiraha korontada kaas oo lagu sameeyay dib-u-dhaca dabka iyo qalabka is-bakhtiinta.
Waa maxay saamaynta cabbirka bay'ada ee isku xiraha?
Halbeegga bay'ada waxaa ka mid ah heerkulka, huurka, isbedelka heerkulka, cadaadiska jawiga iyo deegaanka daxalka. Maadaama bay'adda gaadiidka iyo kaydinta ay saamayn weyn ku leedahay isku xiraha, xulashada isku xiraha waa in lagu saleeyaa bay'ada dhabta ah.
Waa maxay qaybaha isku xirayaasha?
Xidhiidhiyayaashu waxay u kala saari karaan isku-xiraha soo noqnoqda iyo isku-xiraha soo noqnoqda oo ku saleysan soo noqnoqoshada. Waxa kale oo lagu kala saari karaa iyada oo ku saleysan qaabka loo rogay conncetor -ka iyo isku xiraha leydika. Marka loo eego adeegsiga, isku -xirayaashu waxay u adeegsan karaan sabuuradda daabacan, kabadhka qalabka, qalabka dhawaaqa, isku xiraha awoodda iyo adeegsiga kale ee gaarka ah.
Waa maxay isku xirnaanta ka hor
Xidhiidhka hore-u-dahaadhka ah waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xiriirinta barokaca dahaarka, kaas oo la alifay 1960-kii Mareykanka Waxay leedahay astaamo ay ka mid yihiin isku hallayn sare, qiime jaban, fududahay in la isticmaalo, iwm. Waxay ku habboon tahay isku xirnaanta fiilada cajaladda. Looma baahna in meesha laga saaro lakabka dahaarka leh ee fiilada, maxaa yeelay waxay ku tiirsan tahay guga xiriirka U-qaabeeya, kaas oo dhex geli kara lakabka dahaarka, ka dhig kalkaalku inuu galo jeexitaanka oo uu ku xidhmo jeexitaanka guga xidhiidhka, si loo hubiyo in korontadu socoto inta u dhaxaysa kaadiyaha iyo guga caleenku waa mid adag. Xidhiidhka hore-u-dahaadhka ahi wuxuu ku lug leeyahay oo keliya qalab fudud, laakiin fiilo leh cabbir silig lagu qiimeeyo ayaa loo baahan yahay.
Waa maxay hababka isku xira wadajirka ah?
Hababka waxaa ka mid ah alxanka, alxanka cadaadiska, isku xirka siligga, isku-xirnaanta hore-u-dahaarka, iyo xiridda dhejinta.
Maxay tahay in la tixgeliyo heerkulka deegaanka ee isku xiraha?
Heerkulka shaqadu wuxuu ku xiran yahay walxaha birta ah iyo qalabka dahaarka ee isku xiraha. Heerkulka sare ayaa burburin kara wax -ka -hortagga, kaas oo yareynaya iska -caabbinta dahaarka iyo ka -hortagga u adkaysiga danab tijaabo ah; Biraha, heerkulka sare wuxuu ka dhigi karaa barta xiriirka inay lumiso dabacsanaanta, dardar -gelinta oksaydhka oo ka dhigto walxaha daboolista metamorphic. Guud ahaan, heerkulka deegaanku wuxuu u dhexeeyaa -55.
Waa maxay nolosha farsameeyaha isku xiraha?
Nolosha farsamadu waa wadarta wakhtiyada la isku xiro oo laga furo. Guud ahaan, nolosha Farsamadu waxay u dhaxaysaa 500 ilaa 1000 jeer. Kahor intaadan gaarin nolosha farsamada, iska -caabbinta xiriirka celceliska, iska -caabbinta dahaarka iyo ka -hortagga korantada tijaabada waa inaysan dhaafin qiimaha la qiimeeyay.
Waa maxay awoodaha isku xiraha warshadaha ee interface interface?
Iskuxirka warshadaha ANEN ee iskuxirka warshadaha ayaa qaatay qaab dhismeed isku dhafan, macaamiisha ayaa si fudud u raaci kara cabirka daloolka ee qeexitaanka si ay u garaacaan oo u xiraan.
Waa maxay macnaha "MIM"?
Molding Metal Injection (MIM) waa geedi socod biraha ka samaysan oo birta aadka u xoog badan lagu qaso wax isku xira si loo abuuro "feedstock" kaas oo markaa qaabeeya oo adkaynaya iyadoo la isticmaalayo wax-ka-duridda. Waa tiknoolajiyad sare oo si dhaqso leh u soo baxday sannadahan.
Miyuu lab ah isku xiraha IC600 ma dhaawacmaa haddii uu ka soo dhaco meelo kala duwan?
Maya, lab ah isku xiraha IC600 ayaa lagu tijaabiyey hoosta.
Waa maxay alaabta ceeriin ee terminal isku xira warshadaha IC 600?
Qalabka waxaa ka mid ah H65 naxaas ah. Waxyaabaha ku jira naxaasku aad ayay u sarreeyaan oo dusha sare ee terminaalka waxaa lagu daboolay lacag, taas oo inta badan kordhisa tabinta isku xiraha.
Waa maxay faraqa u dhexeeya isku xiraha awoodda ANEN iyo kuwa kale?
Xiriiriyaha korontada ee ANEN ayaa si dhaqso ah isku xiri kara oo u jari kara. Waxay si joogto ah ugu wareejin kartaa korontada iyo danabyada.
Muxuu khuseeyaa isku xiraha warshadaha?
Xidhiidhiyayaasha warshadaha ayaa ku habboon saldhigga korontada korontada, baabuurka korantada ee degdegga ah, cutubka korontada, korontada korantada, maraakiibta, iyo macdanta, iwm.
Sida loo xiro IC 600 Board interface interface
Habsocodka bakhtiinta: Calaamadaha ku yaal bareeska iyo godka waa in la kala safaa. Geli bareesada godka joogsiga, ka dibna sii sii geli cadaadiska axial oo isku mar u leexo dhanka midig (ka arag baalka xagga jihada gelinta) ilaa qufulka bayonet -ka uu ku lug yeesho.
Furashada furitaanka: Furka hore u sii riix oo bidix u leexo waqti isku mid ah (oo ku salaysan jihada marka la geliyo) ilaa calaamadaha ku yaal baloogyada lagu muujiyo xarriiq toosan, ka dibna jiid baalka.
Sidee loo tijaabiyaa caddaynta farta ee isku xiraha?
Tallaabada 1: geli farta caddeynta farta xagga hore ee alaabta ilaa aan la riixi karin.
Tallaabada 2: geli tiirka taban ee multimeterka hoose ee alaabta ilaa ay ka gaadho terminal -ka gudaha.
Tallaabada 3: isticmaal cirifka wanaagsan ee multimeterka si aad u taabato caddeynta farta.
Tallaabada 4: haddii qiimaha iska -caabbintu uu yahay eber, markaa caddaynta farta ma aysan gaarin terminal imtixaankuna waa gudbay.
Waa maxay waxqabadka deegaanku?
Waxqabadka deegaanka waxaa ka mid ah iska caabin heerkulka, u adkaysiga qoyaanka, gariirka iyo saamaynta.
Iska caabbinta kuleylka: heerkulka ugu sarreeya ee isku xiraha waa 200.
Waa maxay ogaanshaha xoogga daloolka ee keli ah?
Awoodda kala -soocidda daloolka keli ah waxaa loola jeedaa xoogga kala -soocidda qaybta xiriirka laga bilaabo dhaqdhaqaaq la'aan ilaa motorial, kaas oo loo isticmaalo inuu matalo xiriirka u dhexeeya biinka galinta iyo godka.
Waa maxay ogaanshaha deg -degga ah?
Qaar ka mid ah boosteejooyinka waxaa loo isticmaalaa jawi gariir firfircoon.
Tijaabadan waxay u isticmaashaa oo kaliya inay tijaabiso haddii iska -caabbinta xiriirku ay tahay mid u qalma, laakiin lama dammaanad qaadi karo in lagu kalsoonaan karo jawiga firfircoon. waxaa fiican in la sameeyo imtixaanka gariirka firfircoon si loo qiimeeyo isku halayntiisa.
Sidee baad u hubisaa tayada terminal -ka?
Markaad dooranayso terminal xarigga, waa inaad si taxaddar leh u kala soocdaa:
Marka hore, fiiri muuqaalka, badeecada wanaagsani waa sida farsamada gacanta, oo qofka siisa dareen farxad iyo rayn rayn leh leh;
Marka labaad, xulashada agabku waa inay ahaato mid wanaagsan, qaybaha dahaarka waa in laga sameeyaa balaastikada injineernimada dab -damiska iyo qalabka tabinta waa inaan laga samayn bir. Waxa ugu muhiimsan waa farsamaynta dunta. Haddii farsamaynta dunta aysan fiicnayn oo xilliga torsional -ku uusan gaarin heerka, shaqadii siligga ayaa lumi doonta.
Waxaa jira afar siyaabood oo sahlan oo lagu tijaabin karo: muuqaal (muuqashada jeegga); caddadka miisaanka (haddii uu aad u khafiif yahay); Isticmaalka dabka (dab -damiyaha); isku day torsion -ka.
Waa maxay iska caabin arc?
Iska caabbinta qaansadu waa awood u lahaanshaha u adkaysiga arc -ka shey -ku -daboolista dushiisa iyada oo la raacayo xaalado tijaabo oo cayiman Tijaabada, waxaa loo adeegsadaa in lagu beddelo danab sare oo leh tamar yar, iyadoo la kaashanayo arc koronto oo u dhexeeya labada koronto, oo qiyaasi kara iska caabinta arc ee wax dahaarka, oo ku salaysan waqtiga in kharashka si ay u sameeyaan lakabka tabinta dusha sare ee.
Waa maxay iska caabin gubashadu?
Gubashada iska caabbintu waa awood u lahaanshaha iska caabbinta gubashada walxaha dahaarka leh marka ay la xiriirto ololka. Iyada oo ay sii kordhayso adeegsiga qalabka dahaarka leh, waxaa aad muhiim u ah in la hagaajiyo iska caabbinta gubashada ee insulator -ka iyo in la hagaajiyo iska -caabbinta walxaha dahaarka leh waxaa loola jeedaa. Markasta oo uu iska caabbinta dabku kor u kaco, waxaa badanaya badbaadada.
Waa maxay xoogga dabarku?
Waa culayska ugu badan ee gilgilashada kaas oo ka dhashay muunadda imtixaanka gilgilashada.
Waa tijaabada ugu badan ee loo adeegsado oo wakiil ka ah imtixaanka guryaha farsamooyinka ee qalabka dahaarka leh.
Waa maxay heer -kulka sare u kaca?
Marka heerkulka qalabka korontada uu ka sarreeyo heerkulka qolka, xad -dhaafka waxaa loogu yeeraa heer kulka. Marka korontadu shiddo, heerkulka kaariyuhu wuu kordhayaa ilaa uu noqdo mid deggan. Xaaladda xasilloonidu waxay u baahan tahay farqiga heerkulka kama badna 2.
Waa maxay halbeegga amniga ee isku xiraha?
Caabuqa dahaarka, iska caabinta cadaadiska, dabka.
Waa maxay baaritaanka cadaadiska kubbadda?
Imtixaanka cadaadiska kubbadu waa iska caabinta kulaylka. Astaamaha adkaysiga Thermoduric micnaheedu waa agab, gaar ahaan kuleyliyaha ayaa leh astaamaha shoogga ka-hortagga kuleylka iyo ka-hor-tagga hoos xaaladda kulul. Iska caabbinta kulaylka ee agabka ayaa guud ahaan lagu xaqiijiyaa imtixaanka cadaadiska kubbadda. Baaritaankani wuxuu quseeyaa walxaha ka -hortagga ee u adeegsada ilaalinta jirka korontada ku shaqeeya.